I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Elizabeth
Zizwe usekhaya kulo mndeni owodwa, amakamelo amabili okulala, indlu yokugezela eyodwa yaphakathi nekhulu leminyaka, ehlinzekwa yi-SuperHost. Leli phedi elihle endaweni okuhlala abantu lingaphakathi kwebanga lokuhamba lase-Bojangles Coliseum, i-Ovens Auditorium, i-Park Expo, i-Sal's Pizza, kanye ne-Vaulted Oak Brewery endaweni ehlala abantu eseduze nendawo yedolobha. Ukusetshenziswa ngokugcwele kwendawo kanye nekhaya - ikhishi, indawo yokudlela, izindawo ezimbili zokuhlala, indawo yokupaka mahhala kanye nesitezi esikhulu sangasese.ASIKUVUMELEKILE UKUBEKA ABANTU BENDAWO YASE-CHARLOTTE REGION.
Uma ufuna ukuba seduze nayo yonke into, kodwa ujabulele ukuthula okuncane nokuthula noma ukunethezeka kwekhaya kungani ulungele noma yini encane! Khohlwa amagumbi ehhotela angenalutho. Ungakhathazeki ngokwabelana ngodonga nomuntu ongamazi noma ukukhempa egcekeni lomunye umuntu. Shiya usesho lwedekhi yokupaka elungile phezulu kwedolobha kuze kube yilapho usungenile futhi uphumule. Kunalokho, woza ujabulele ukuzola okubanzi kwendlu yami egqumeni. Futhi upakishe ukukhanya... ngoba ungawasha endaweni yami. Ukufinyelela kuwumoya ohelezayo futhi i-driveway inkulu ngokwanele izimoto eziningi. Sigcina inqubomgomo yokukhansela evumelana nezimo, futhi amanani ami awashintshi ngaphandle kwangenkathi (eyivelakancane kakhulu) 'ye-superevent'. Awekho nhlobo amaqembu, noma imicimbi yanoma yiluphi uhlobo evunyelwe. Ukusetshenziswa kweziko akuvunyelwe.
I-high-speed wireless, i-cable TV, imishini yokuwasha, imibhede enethezekile, nekhishi eligcwele.
I-HDTV ene- Hulu, I-Roku
Njengoba sikhula isidingo sezindlu ezisedolobheni kanye nentuthuko yezohwebo iqhubeka nokukhula nxazonke zethu, sibuke indawo yakithi encane ethule iphenduka into eshisayo kubahlali abajabulela indawo encane kanye nokunethezeka okuningi. Yebo, ngiyakwazi kusukela ngaqala ukuthuthela lapha ngo-2003! Le ndawo yasungulwa enkathini yegolide yangemva kwempi yaseMelika, le ndawo icwile phakathi nekhulu leminyaka futhi inenzuzo eyengeziwe yompheme wesihlahla se-oki esivuthiwe. Jabulela ukuhamba emigwaqweni enemigqa yezihlahla, uvakashele "ipaki lethu elincane".
Okuningi noma okuncane njengoba kudingeka, ngaphakathi kwesizathu. Angihlali kule ndawo, kodwa ngikhona lapho uma kukhona okungahambi kahle noma ufuna ukushaya umoya noma uthole amathiphu mayelana nezithakazelo zasendaweni.